Iindaba -I-XCMG XZ3600 ethe tyaba yomkhombe wokugrumba iarig iphinde ibe "yingcali" ekuweleni ngaphantsi komhlaba
I-XCMG XZ3600 ethe tyaba yesikhokelo sokugrumba iye kwakhona yaba "yingcali" ekuweleni ngaphantsi komhlaba
Emva kokuwela i-135MPa ye-geology enzima kakhulu, i-XCMG XZ3600 ethe tyaba yomkhombe wokomba, egxile kakhulu "kumathambo alukhuni", iphinde yaba "yingcali" ekuweleni ngaphantsi komhlaba
Kutshanje, imodeli eqhumayo ye-tonnage XZ3600 yeXCMG ethe tyaba yomkhombe wokugrumba isixhobo iwele ngempumelelo i-Songhua River kwakhona, ebuye yahlaziya irekhodi lomgama omde ogqithwe yi-XZ3600 ethe tyaba yomkhombe wokugrumba ukuya kwi-2400m!
Ukuwela yiprojekthi yombhobho wegesi waseDehui-Fuyu, eyiprojekhthi yemibhobho yesixeko. Indawo yokungena ikwicala leFuyu City, kwaye indawo yokwemba ikwicala leDehui City. Ububanzi bepayipi ngama-323.9mm, i-engile yokungena eyiliweyo kunye ne-engile yokomba zombini zi-12 °, kwaye elona xabiso lilonke lokuwela ubude likufutshane ne-2400m. Le projekthi isebenzisa i-XCMG enkulu yeetoni ezinkulu zokugoba i-XZ3600 yokuwela +.
Umbhobho wenzelwe ukuba ungcwatywe kubunzulu be-45m emazantsi oMlambo iSonghua. Ngexesha lolwakhiwo, kufuneka idlule kuludwe oluntsonkothileyo olunje ngesanti, igrabile kunye negranite. Ubulukhuni belitye bufikelela kuma-68.5MPa, okwenza ulwakhiwo lube nzima kwaye lube yingozi.
I-XCMG XZ3600 ibonakalise ngokungaguquguqukiyo kunye nokusebenza okuzinzileyo ngexesha lenkqubo yokwakha, kwaye ibambisana neqela lokwakha eligqibeleleyo ukugqibezela umsebenzi wokubekwa kwemibhobho, ongumqobo obalulekileyo kwiProjekthi yePayipi yeDehui-Fuyu.
I-XCMG XZ3600 yecala lokukhomba ulayini, ngenxa yeenzuzo zalo ezinje ngobukrelekrele obuphezulu, ukusebenza okungcono, kunye nokonga umbane ngakumbi, idlale indima yokuba "ngumphathi" kwipayipi yokuwela kunye nokubeka iiprojekthi kwiiprojekthi ezininzi eziphambili zokuphila kwabantu, nto leyo eyenza ukuba kube nzima imisebenzi. "Indawo ethintelweyo yokwakha" isuswe ngempumelelo!
Nge-Agasti ka-2020, i "Dongdong Line" yombhobho omde weoyile ekrwada uya kudlula kwi-135MPa ethe-ethe ye-rocky granite. I-XCMG XZ3600 iphumelele "ukukrola" eli thambo lilukhuni ngobuchwephesha bayo, ukusebenza okuzinzileyo, kunye nendlela yokwakha egqibeleleyo. Utsale ngempumelelo umva phakathi kwexesha.
NgeyoMnga ngo-2019, kwiprojekthi yokuwela uMlambo iLiaohe, i-XCMG XZ3600 ethe tyaba yomkhombandlela wokugumba wasebenza emazantsi omlambo kubunzulu be-28m. Kuthathe kuphela iiyure ezi-6 ukugqiba umbhobho wokutsala. Umgangatho obalaseleyo kunye nozinzo lwezixhobo ze-XCMG ziye zanconywa ngabathengi.
Ngo-Okthobha u-2017, ii-tonnage ezimbini ezithe tyaba zendlela ezijolise kwi-XCMG XZ5000 kunye ne-XZ3000 zinqumle uMlambo iSonghua ngesandla, zenza "iprojekhthi enkulu" kwimbali yokuwela.
Ngoku i-XCMG XZ3600 iwela uMlambo i-Songhua kwakhona, ibonisa amandla omeleleyo we-XCMG oxwesileyo wokukhomba izixhobo njengesixhobo "esisebenzayo" samandla ahlukeneyo kunye neeprojekthi zokuphila kwabantu!
Ixesha Post: Apr-10-2021
I-hdd rig, Umatshini wokugrumba amaqula, umatshini wokugrumba i-hdd, Horizontal Directional Ukubhola Rig,